LAAMIYEYAASHA CHERRY: FAA'IIDO IYO WAXYEELO, SIFOOYINKA DAAWOOYINKA IYO CONTRAINDICATIONS, KA KOOBAN IYO ISTICMAALKA. SIDA LOO ISTICMAALO SHAAHA IYO SOO DHAJI DECOCTION AH EE SAQAFYADA - CHERRY
Digaagaha faa'iido leh ee jeeriga
Waxaan u cambaareyneynaa xaqiiqda ah in isticmaalka ugu muhiimsan ee geedaha khudradda ah ay si sax ah u khudradaan miraha. Laakiin daawada dhaqameedu waxay ogyihiin in jilifaha dhirta noocaan oo kale ah uu sidoo kale bogsiiyo guryaha. Aynu hadlo maanta oo ku saabsan laamaha cherry, oo ku saabsan isticmaalka loogu talagalay horumarinta caafimaadka, oo ku saabsan sifooyinka diyaarinta iyo soo dhaweynta cabitaanka daawooyinka.
Waxyaabaha kiimikada ee kiimikada cherry
Ka hor intaanad bilaabin isticmaalka qaab kasta oo daawo dhaqameed ah, waxaan kugula talineynaa in aad barato astaamaha asaasiga ah ee alaabta asaasiga ah. Xaaladdan oo kale - laamaha geedka cherry.
Soo ogow sida ay cherry u faa'iido u tahay jirka aadanaha.
Qalabka kiimikada ee khudradda miraha cherry iyo jilifka geedkan waxay leeyihiin qaybo waaweyn oo isku mid ah:
walxaha macdanta - fosfooraska, zinc, potassium, magnesium, copper, chromium, sodium, kalsiyum, birta;
fitamiinada - B, PP, A, E, C;
Intaa waxaa dheer, laamiyada cherry waxaa ku jira:
Iyadoo loo eegayo habka isku dheelitirka ee kiimikooyinka ee jilif iyo qoryo, laamiyada cherry waxay noqdeen ilaha dhaqanka dabiiciga ah ee jidhka leh maadooyin iyo fitamiino.
Ma taqaanaa? Berry Cherry loo isticmaalo si loo daaweeyo suuxdinta.
Guryaha dawooyinka ee laamiyada cherry
Awoodda bogsashada leh ee ku jirta laanta cherry ayaa saameyn ku leh qaababka jirka ee kala duwan:
kiciyaa hababka difaaca;
xoojiyaa nidaamka xididada;
jeermiska afka iyo caarada;
waxay ka hortagtaa horumarinta cudurrada viral ee nidaamka neefsiga;
waxay yareyneysaa cadaadiska sababtoo ah saameynta duriinka;
tones oo xoogsaaraya;
waxay hoos u dhigtaa geedi socodka gabowga (ayadoo ay ugu wacan tahay maaddada antioxidants);
ku kobcinayaan folic acid (muhiim u ah dumarka uurka leh iyo kuwa nuujinaya);
waxay hagaajineysaa shaqada mareenka caloosha iyo mindhicirka (GIT);
wuxuu joojiyaa koritaanka qaababka benignimada;
wuxuu yareynayaa xoojinta geeddi-socodka bararka ee xubnaha.
Dhammaan guryaha kor ku xusan waxay suurtageliyeen in ay isticmaalaan laanta cherry ee daawada dabiiciga ah si loo bogsado cudurada kala duwan.
Waaya-aragnimada muddada dheer ee isticmaalka saqafyada xayawaanka ah sida wakiilka bogsashada ayaa aqoonsaday cudurrada iyo xaaladaha cabitaanka laga diyaariyay maadooyinka cayayaanka sida ugu saameysa faa'iidada. Waxaanu ku taxnay:
cudurrada nidaamka neefsiga (dhuun xanuun, xayawaan, iwm);
Waxyaabaha kiimikada ee kiimikada qoyan waxay leedahay saameyn ku timaadda jidhka bini'aadamka. Sidaa darteed, shaah laga sameeyey waxay ka caawisaa in laga takhaluso bararka cudurada wadnaha, cudurada kaadi-haysta iyo bararka inta ay uurka leeyihiin.
Nettle, Honeysuckle, hellebore, dabocad, surwax, pine daikon, aconite faa'iido u ah nidaamka wadnaha iyo.
Haweenka ku jira booska iyo hooyooyinka kalkaaliyaasha ayaa ka faa'iideysan doona shaaha lafa ahaanta cherry sababtoo ah maadada sare ee folic acid ee cabitaanka. Laakiin ka hor inta aan la codsanin waa ka wanaagsan tahay inaad la tashato takhtarka si looga fogaado waxyeellada suurtagalka ah
Ka hor intaanad bilaabin daaweynta hababka dhaqameed, waxaad u baahan tahay inaad ogaato oo keliya ma'aha faa'iidooyinka daaweyn gaar ah, laakiin sidoo kale waxyeellada suurtogalka ah ama khilaafka la isticmaalo.
Sida for saqafyada cherry ah, waayo, isticmaalkooda ma jiraan wax iska hor imaadyo badan:
Ku saabsan sonkorowga, waxaa jira fikrad kale. Diabetics qaarkood waxay natiijo fiican ka heleen daaweynta shaambada sonkorta ee ka soo go'day geedka. Waxan ku sifeyn doonaa tan kale qaybta ku saabsan faa'iidooyinka cabitaankan.
Waa muhiim! Ha ilaawin qiyaasta, mudada iyo inta jeer ee maamulka. Haddii ay dhacdo in ka badan xad-dhaaf ah, miyir-beedka ayaa la ogaanayaa maadada sare ee acids ee jilif iyo qoryaha cherry.
Inta badan ilaha daawada dhaqameedku waxay ka hadlaan wakhtiga ururinta ee laamiyada cherry inta lagu jiro bararka guga ee burooyinkeeda geedka. Xagga dhexe, tani waxay dhacdaa dhammaadka Abriil. Isticmaalida daaweynta qamaarad yar ilaa 10 cm dheer. Iska yaree mindi fiiqan oo ka timaada geed caafimaad leh oo aan la tallaalin.
Haddii aad rabto in aad marar badan cabto cabitaanada lafdhabarta, dabadeed isku day in aad u diyaargarowdo tiradaas oo kugu filan sanad.
Iska yaree laamaha waa in la dhaqaa oo la qalajiyaa aag, haadi wanaagsan oo hawo leh. Si arrintan loo sameeyo, waxaa ka wanaagsan inaad iyaga xirto rucubyo yaryar oo ah 10-15 gogo 'oo ay ku xiraan xarig. Marka ay laamaha qalalan yihiin, waxay ku jiraan boorsooyinka warqadaha oo lagu kaydiyaa meel qalalan.
Isticmaal: Sidaad u soo qaadan lahayd Cherry Sprigs
Laga soo bilaabo lugaha geed geedka this waxaad samayn kartaa shaaha caafimaadka leh iyo decoction, kuwaas oo loo isticmaalo cudurada kala duwan.
Si aad u sameyso shaaha, waxaad u baahan tahay inaad qaadato 4-5 saqaf, googo ama ku burbur googo yar yar (1 sm kasta) oo ku walaaq biyo karkaraya (0.5 litir). Dheriga wuxuu ka fiican yahay inuu ka qaato bir aan saliid lahayn. Marka ay biyuhu qariyaan, waxaad u baahan tahay inaad yareyso kuleylka isla markaana ku karsho kuleylka hooseeya 10 daqiiqo, kadibna ku shub dareeraha keena qulqulka (adigoon isaga jarin) oo ku adkee ilaa inta cabitaanku ku jiro midabka (15-30 daqiiqo). Ka dibna adkee shaaha. Kabaha ayaa weli loo isticmaali karaa labanlaab si ay u soo baxaan, mar kasta oo waqti karinta waa in la kordhiyaa 5-10 daqiiqo. In ka badan saddex jeer alaabta ceeriin macno maaha in la isticmaalo, maaddaama nafaqooyinka waqtigaan la siin doono ugu badnaan.
Diyaarso cabitaan caafimaad leh ma aha oo kaliya laga bilaabo laamaha geedka. Shaaha ka soo caleemaha geedka geedkan sidoo kale wuxuu leeyahay bogsashada guryaha.
In shaaha, waxaad ku dari kartaa wax yar malab ama qorfe. Cab wax ka badan saddex koob oo maalintii. Shaaha wuxuu ka caawiyaa hargab, shuban, wuxuu dib u soo noolaanayaa jidhka, wuxuu ku quudiyaa tamar, wuxuuna saaraa dheecaanka xad-dhaafka ah. Waxay faa'iido u leedahay haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya, dadka qaba dhiig-yaraanta dhiigga.
Dhiig-qoynta, waxaad u baahan tahay inaad cabto 1 dhalo saddex jeer maalintii laba maalmood (maalinta saddexaad waa in dhiigbaxu istaago). Cabitaankani wuxuu ku haboon yahay inuu isticmaalo sida cusub oo loo rogay. Waxaa la cabi karaa kulul iyo qabow.
Waa muhiim! Qubka qaboojiyaha waa inay ahaataa tiro yar inta lagu jiro maalinta si loo isticmaalo.
Cabitaan kale oo la diyaarin karo alaabta ceeriin ee la kariyey waa decoction. Waxaa loo diyaariyaa sida soo socota: qiyaastii 20 xayawaan ayaa la jajabiyey, ku shubay biyo qabow mugga 2 litir oo dabka ku shubay. Karkari muddo 15 daqiiqo ah oo ku adkeyso laba saacadood, ka dibna xaddid. In decoction dhamaystiran, waxaad ku dari kartaa wax yar malab ah.
Xasuuso in sifooyinka wanaagsan ee malabku lumo marka la kululeeyo, markaa ha ku darin cabitaan aad u kulul.
Cabbitaanka soo baxa waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin kala duwan. Iyadoo ay taasi ku xiran tahay, isbedellada maamulka iyo isbeddellada qiyaasta:
ee daaweynta arthritis-ka iyo geedi-socodka bararka jirka - afar koob oo afar jeer maalintii;
daaweynta endometriosis iyo fibroids - saddex koob oo maalintii ah sanadkiiba (si aad u diyaariso decoction, qaado qiyaastii 20 digaag, ku shub laba litir oo biyo qabow oo karkaraya 5-10 daqiiqo oo kulaylka hooseeya, ka bax saacad nus ah meel madow diiran);
maraq la mid ah ayaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurka macaanka. Waxaa la qaadaa ilaa 5 jeer maalintii 1 koob. Cab muddo 10 maalmood ah, ka dibna qaado nasasho muddadaas. Ku celi koorsada laba jeer oo kale.
Maraq ayaa sidoo kale loo isticmaalaa maro haweenka siilka, afka gashiga loogu talagalay stomatitis.
Ma taqaanaa? Japanese Sakura waa nooc ka mid ah cherry, laakiin, nasiib daro, miraha ay yihiin kuwo aan la karin. Midabka badan ee blossoms cherry wuxuu jecelyahay Japa ma aha oo kaliya quruxdiisa: waxay muujinaysaa dhalidda sare ee bariiska.
Daaweynta xasaasiyadda xilliyeed ee bilowga kahor intaanay bilaabmin, waxaad ka cabi kartaa cabitaanka caanaha adoo isticmaalaya saqafyo. Si loo dhamaystiro, alaabta ceeriin ee la kariyey waxay u baahan tahay in la gooyo qaybo 5cm, iyaga ku duubo foornada iyo dubi foornada illaa laba saacadood illaa inta dhuxusha la helo. Qaado hal dhuxul, si fiican u burbur iyo uumi ku rid galaas caano diiran. Waxaad u baahan tahay inaad cabto cabitaankaan calool madhan ilaa toban maalmood. Ka dib fasax toban maalmood ah, ku celceli koorsada. Cabitaanku waa inuu noqdaa mid cusub oo diyaariya subax kasta.
Hadda, ma aha oo keliya shaaha Hindiya ama Ceylon waxay ku jiri doontaa miiskaaga, laakiin sidoo kale cabitaankaa iyo cabitaanka caafimaadka leh ee laga sameeyey digaagga ee jeeriga. Decoction laga sameeyey iyaga ka caawin doonaan bogsashada ee xanuunada badan. Iska ilaalinta bukaanka cherry cherry ee guga, ka dhigi cabitaan iyaga ka - iyo cuduro badan ayaa soo kabanaya.